अझै हिँड्नु छ हजारौं माइल- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
अझै हिँड्नु छ हजारौं माइल
हिंसामा परेका देहातका असहाय महिलाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मूल मुद्दा बोकेर रूबी खानसहितको टोली नेपालगन्जबाट काठमाडौं आइपुगेको थियो । ढिलै भए पनि केही दिनअघि सरकारले ‘माग पूरा गर्छौं’ भन्यो । र, हाललाई आन्दोलन स्थगित छ, रोकिएको छैन । आन्दोलनमा सहभागीमध्ये एक रूबी खानले आफ्नो अनुभव लेखेकी छन् ।
पुस २४, २०७८ रुबी खान
नेपालगन्जका निर्मला कुर्मी र नन्कुन्नी धोबीका लागि न्यायको लडाइँमा होमिएको लामो समय भयो, न्याय अझै नजिक छैन । निर्मलाको परिवारका सदस्यको शंकास्पद मृत्यु भयो, अनेक षड्यन्त्र गरी उनलाई पनि बेपत्ता पारियो । घटनामा संलग्नहरूविरुद्ध जति नै आवाज उठाए पनि सुनुवाइ भएको छैन । निरीह महिलाहरूमाथि यति ठूलो अन्याय भइरहँदा पनि राज्यका संरचनाहरू मौन छन् । महिलाको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन मात्र होइन, यो मानव अधिकारकै उल्लंघन हो भन्ने जान्दा पनि स्थानीय सरकारदेखि सम्बन्धित सबै निकाय न्यायका लागि प्रतिबद्ध छैनन् । हामी आफ्नै बलबुतामा लड्नुपरिरहेको छ, आन्दोलन गर्नुपरिरहेको छ ।
उत्पीडनविरुद्ध कदम बढाउँदा हामीलाई कैयौंपटक रोक्न खोजिएको छ । शक्ति र सत्तामा पहुँच भएकाहरू हाम्रो आँसुमा रमाइरहेका देखेका छौं । निर्मलाको सम्पत्ति हडप्न निकै घीनलाग्दो काम भइरहँदा पनि तिनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सम्बन्धित निकायले आनाकानी गरिरह्यो ।
निकै लामो हिँडाइपछि पनि हामीलाई थकान महसुस भएको छैन । बरु हामीसँग प्रश्नहरू छन्— न्यायका लागि अझै कहिलेसम्म संघर्ष गरिरहनुपर्ने हो ? हामीलाई कसले दिन्छ न्याय ? कसरी पाइन्छ न्याय ?
नेपालको संविधानले महिलालाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । महिला हिंसा वर्जित गर्ने संविधानमा टेकेर अनेक कानुन बनेका छन् । कानुन पालनाका लागि अनेकन संरचना छन्, पदाधिकारी छन् । कहीँकतैबाट महिलाका आवाज नदबियोस्, महिलाहरू हिंसाको सिकार नबनून् भन्ने तिनका उद्देश्य र कार्य क्षेत्र हुन् । महिलाको सुरक्षा, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मानसहितको बाँच्न पाउने अधिकार स्थापनाकै लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता भएका छन् । महिला हिंसाविरुद्धका अभियान बारम्बार चलिरहन्छन् । यस्ता कानुन, सन्धि र सम्झौता बनाउनुपछाडिको कारण हो— सरकारलाई खबरदारी गर्नु । विभिन्न कालखण्डमा महिलाले अधिकार प्राप्तिका लागि
आफ्नै तरिकाले संर्घष गरेको इतिहास छ । महिला आन्दोलन विभिन्न चरणमा कहिले मुखर भएका छन् त कहिले शिथिल । तर, यति धेरै सयन्त्र र प्रयासपछि पनि राज्य संरचना अझै महिलामैत्री छैनन् भन्ने उजागर गर्छ– निर्मलाका लागि न्याय माग्दा हामीले भोग्नुपरेको कष्टले ! र, अझै यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अर्को पुस्ताले पनि हामीझैं महिला हिंसाविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपर्नेछ ।
महिलाका सवाल हाम्रो समाजमा गम्भीरता साथ हेरिँदैन । न महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएको छ । कतिसम्म भने, निर्मलाको न्यायका लागि हामी धाएका प्रत्येक सरकारी–गैरसरकारी कार्यालयका पदाधिकारीमा पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण उही पायौं– पुरातन र पितृसत्तात्मक !
न्यायका लागि हामीले ढक्ढक्याएका ढोकाहरू खुल्न सकेनन्, यही सोचले ।
यति लामो यात्रामा हामी बेलाबेला निराश भएका छौं, तर न्याय पाउने आशा मरेको छैन । यसका लागि जस्तै संघर्ष गर्नुपरे पनि हामी मानसिक रूपमा तयार छौं । यो न्याय यति बहुमूल्य छ, जो ‘ठूला’ हरूसँग मात्रै हुने रहेछ । देहातबाट हिँड्दै काठमाडौं आएका हामीले यति शक्तिशाली व्यक्ति र यस्तो बलशाली पितृसत्ताविरुद्ध लड्नुपरिरहेकै छ अनवरत ।
पुरुषप्रधान यो समाज सोच्छ छ– ‘महिलामाथि हिंसा हुनु सामान्य कुरा हो । महिलाहरू हिंसा भोग्नकै लागि जन्मेका हुन् । उनीहरू खाना पकाउन, घर–व्यवहार चलाउन, बच्चा जन्माउन, रेखदेख गर्न, स्याहारसुसार गर्न जन्मेका हुन् । योबाहेक महिलाको जीवन छैन । महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार किन दिनुपर्‍यो ? महिलालाई घरमुली किन बनाउनुपर्‍र्या ? महिलालाई घरबाहिर किन पठाउनु पर्‍यो ? महिलालाई घरभित्रै राख्नुपर्छ । यिनीहरू लजालु हुनुपर्छ ।’ यस्तो सोचले महिलामाथिको हिंसामा बढोत्तरी भइरहेको छ । र, यस्तै सोचले महिलाका मुद्दा अझै प्राथमिकतामा छैनन् ।
जब कोही महिला हिंसामा पर्छिन्, तब सकभर त्यो हिंसाबारे उनी बाहिर नबोलून् भन्ने सोच्छ यो समाज । उनी बोले परिवारकै बेइज्जत हुन्छ भनिन्छ । र, सम्झाईबुझाई घरभित्रै यस्ता हिंसालाई साम्य पार्न खोजिन्छ । जब उनी सम्झिन–बुझ्न मान्दिनन् र ‘मलाई हिंसा भयो, मलाई न्याय चाहियो’ भनेर घरको चौघेरा नाघ्छिन्, तब खडा हुन्छ चुनौतीको पहाड । उनले ‘म हिंसामा छु’, ‘मलाई न्याय चाहियो’ भन्नेबित्तिकै यो समाजले उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछ । न्याय दिने सम्बन्धित निकायमा पनि उनले अनेकन् प्रश्न सामाना गर्नुपर्छ । न्याय माग्ने महिलालाई उल्टै कठघरामा उभ्याइन्छ । त्यो पनि एकपटक होइन पटक–पटक । बारम्बार उनीमाथि भएको हिंसालाई सम्झना गराइन्छ ।
हिंसापीडित महिलालाई हाम्रो समाज र सरकारी संरचनाहरूले निकै दौडाउँछ, उनीहरूलाई गलाउनका लागि । गरिब तथा विपन्न परिवारका पीडित महिलालाई कहिले समाजका अगुवा भनौंदाको दैलोमा बोलाइन्छन् र भनिन्छ— मिलेर बसे मात्र तिम्रो हित हुन्छ । कहिले घरपरिवारको नाममा त कहिले छरछिमेकीको नाममा मिल्न दबाब दिइन्छ । पीडित महिलालाई भन्ने गरिन्छ, ‘तिमी गरिब छौ, हिंसा गर्ने ठूलाबडा हुन्, उनीहरूसामु उभिने तिमीहरूको हौसियत छैन ।’
महिलालाई न्यायका लागि दौडधुप गर्न कठिन पनि छ । छोराछोरीको रेखदेख गर्नैपर्‍यो । एक दिन खेतमा नगए भोकै बस्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तोमा न्याय माग्न जाने कि, न्याय माग्दा हुने खर्च जोगाएर बालबच्चाको पेट भर्ने ? यस्ता चुनौती चिरेर सम्बन्धित निकायमा पुग्दा अलमलमै परिन्छ । दुविधा मात्रै हुन्छ– कहाँ जाने ? कुन हाकिमसाबले मेरो कुरा सुन्छन् ? हिंसापीडित महिलाले काखमा बच्चा च्यापेर हाकिमसाबको कोठाकोठामा गएर ‘ममाथि हिंसा भयो’ भन्दा ठूलो आवाजमा जवाफ आउँछ— भोलि आउनुस् आज फुर्सद छैन । भोलिपल्ट पुगेर सबै बताउँदा ‘तिम्रै गल्ती होला, मिलेर बस्नु पर्दैन ? दौडेर आइहाल्ने हो ?’ भन्ने प्रश्न गरिन्छ । त्यसपछि पनि बल्लतल्ल ‘कानुनी बाटोमा जान्छु’ भन्दा ‘पर्सि वकिलबाट निवेदन लेखाएर ल्याऊ’ भनिन्छ । यस्ता नानाथरीका झमेला जानाजान दिएजस्तो महसुस हुन्छ ताकि कुनै महिला न्यायका लागि यसरी सरकारी कार्यालय नआऊन् भनेर । कतिपय स्थानमा त, थर्काएरै पठाइन्छ पनि ।
अझ निरीह महिला देखे, प्रहरी प्रशासनका मान्छेले यसो हेर्छन् अनि फेरि उही प्रश्नको सिलसिला सुरु हुन्छ– ‘काँ आको ? नाम के हो ? कोसँग भेट्ने ? हाकिमसाबलाई यसरी भेट्न पाइन्न, हाकिमसाबको भेट्ने समय लिएर आउनुस्, अहिलेलाई जानुस् ।’ यसरी गेटबाटै फर्काइन्छ । हाकिमसाबसँग भेट्न पाए पो समय लिने ! हाकिमसाबले दर्शन दिए पो आफ्नो गुहार राख्ने ! बल्लतल्त थुरथुर काम्दै प्रहरीको गेटमा पुगेकी महिला यस्ता व्यवहारबाट झनै डराएर फर्किहाल्छन् । यसरी पटकपटक प्रहरी कार्यालय धाउँदा भएको पैसा पनि सकिन्छ, न्याय पनि पाइँदैन ! र, घरमा पनि कसैले कुरा सुन्दैन । यस्तो व्यवहारले पीडितलाई झनै पीडित बनाउँछ ।
उता फेरि जो पीडक हो र जसले हिंसा गरेको छ, उसको पहुँचमै हाकिमसाब हुन्छन् । हाकिमसाबको कोठामा समेत बिनारोकटोक आउजाउ गर्छन् । गेटको प्रहरीले पनि ती पीडकलाई रोक्दैन, पीडित महिलालाई जसरी अनेकन् प्रश्न गर्दैन । पीडक शानले हाकिमसाबको सरकारी गाडीमा मज्जाले डुल्छ, तिनलाई कसैले हप्कीदप्की गर्दैन । खासमा न्यायमै पनि असमानता छ । यो महिलामाथिको परोक्ष अन्याय पनि हो । हिंसापीडित महिलाको आत्मसम्मानमा यस्ता गतिविधिले चोट पुर्‍याइरहेको छ, तिनीहरूमाथि ज्यादती भएको छ । महिलाले कानुन, नीतिनियमको पालना गर्नुपर्ने, तर यस्ता प्रावधान पीडकले खल्तीमा राखेर हिँड्छन् । बरु पीडित महिलालाई धम्की दिंदै हिँड्छन् । आफ्नै अघि हिंसापीडित महिलालाई तथानाम गाली गर्दा पनि हाकिमसाब बोल्दैनन् । किनभने व्यक्तिगत स्वार्थ उसको कतर्व्यभन्दा ठूलो छ । उनीहरू सत्यलाई सत्य र झुठलाई झुठ भन्न चाहँदैनन् । पीडक, जो पहुँचवाला पनि हुन्, तिनीहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्ने चाहना कानुनको पालना गर्ने स्थानमा भएकाहरूलाई हुन्न । यस्ता अनुभव हामीले न्यायका लागि लडिरहँदा बटुल्यौं । यो आम हिंसापीडित महिलाको भोगाइ पनि हो ।
महिलाका लागी न्याय भनेको सम्बन्धित निकायमा जाने, फर्किने कसैलाई केही नभनी रुने र भोलिपल्ट फेरि उही सरकारी कार्यलय धाउने, अनि गाली–बेइज्जती सहने । र, उही असजिला प्रश्नको सामाना गर्ने, प्रत्येकपटक सरकारी कार्यलय धाउँदा । सोधिने अनुहार फरकफरक भए पनि प्रश्न उस्तै हुन्छन् । न्यायका लागि जति धेरै आवाज महिलाले उठाउँछन्, त्यति नै धेरै बल त्यसलाई दबाउनमा पीडक लागेको हुन्छ । पीडित महिलाको हिम्मत तोड्न, हौसला परास्त गर्न, चरित्रलाई जोडेर कुरा काट्न पीडक रमाएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा त पैसाको प्रलोभन देखाएर उत्पीडनमा परेका महिलालाई चुपचाप बस्न दबाब दिइन्छ । विद्यमान संरचनामा रहेर गरिब तथा असहाय महिलाले न्याय पाउन निकै संघर्ष गर्नुपर्छ । न्यायमूलक समाज यसरी कसरी बन्छ ? जसलाई यस्तो परेको छैन, तिनलाई यस्तो भोगाइ, सिनेमाको कुनै पटकथाजस्तो लाग्न सक्छ । तैपनि यति प्रतिकूलताका बावजुद न्याय पाउने हाम्रो आशा मरेको छैन । यस्तो अँध्यारोमा पनि टाढा कतै जलिरहेको टुकीको उज्यालोजस्तै भएको न्यायसामु हामी पुग्छौं भन्ने सपना अझै छ । प्रत्येक दिन त्यही सपनाका कारण हामी अघि बढिरहेका छौं । यो सपना अब विपना भएको हेर्न मन छ ।
स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मलाई हामीले न्यायका लागि गुहारेका छौं । तर, हामीले बनाएको सरकारले पनि हामीलाई न्याय दिन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्दै छौं । सरकारीस्तरबाट केही प्रयास नभएका होइनन्, तर यस्तो परिस्थतिमा ती प्रयास अत्यन्तै कमजोर साबित भइरहेका छन् । सरकार भन्छ— सिंहदरबार घरघरमा पुगेको छ । तर, खोइ महिलाका लागि न्याय पुगेको ?
महिलामाथिको उत्पीडनले समाजको अवस्था जर्जर बनाएको छ । जब कसैमाथि अन्याय हुन्छ, तब पीडितभन्दा पहिले पीडक नै प्रहरीकोमा जान्छन्, नेताहरूको घर–घरमा तुरुन्तै पुग्छन् । नेताले पनि ‘किन हिंसा गर्‍यौ, यस्तो गर्नु हुन्न, अब कानुनअनुसार जे कारबाही भोग्नुपर्ने हो त्यसका लागि तयार हौ’ भन्नुको सट्टा उल्टै स्याबासी दिन्छन् र संरक्षण गर्छन् । अझ उत्पीडनमा परेका वर्गलाई थिचोमिचो गर्न प्रोत्साहन गर्छन् । यो यथार्थ हामीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा भोगेका छौं । न्याय पाउन पनि अब त कानुनको होइन, प्रहरी र नेताहरूको दैलोमा धाउनुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्था परिवर्तन नभएसम्म सबैका लागि न्याय समान हुन्न । समस्या हाम्रो कानुनमा होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना र व्यक्तिहरूमा छ, यसलाई मलजल गर्ने राजनीतिक प्रणालीमा छ । स्थानीय सरकारकहाँ न्याय माग्न जाँदा प्रदेशलाई देखाइन्छ । प्रदेश सरकारमा उही माग लिएर जाँदा भनिन्छ– ‘हामी त स्थानीय र संघीय सरकारका पुल मात्रै हौं, अधिकार सबै उतै छ ।’ यस्ता विषय हाम्रो अधिकारभित्रको होइन भन्दै संघतिर देखाइन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले यति भनेपछि हामी संघीय राजधानी काठमाडौं आएका थियौं, यहाँका शासकलाई आफ्नो माग सुनायौं, त्यही पनि महिनौंसम्म हाम्रो मागको सुनुवाइ भएन । न्यायका लागि स्थानीय र प्रदेशमा यतिका संरचना हुँदा पनि हामी बाध्य भएर संघमै आउनुपर्‍यो । यदि संघले मात्रै न्याय दिन्छ भने किन चाहियो प्रदेश र स्थानीय संरचना ? एकअर्कालाई सरकारहरूले औंला तेर्स्याउन थालेपछि न्याय कसरी पाउने हामीले ? पीडितहरू न्याय पाउन काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यतालाई संघीयताले तोड्न सकेको छैन । लाग्छ, न्याय त केवल शब्दमा छ । न्याय केवल कानुनका धाराहरूमा छन्, जसको कार्यान्वयन हुँदै हुँदैनन्, कार्यान्वयन भए पनि ती असहायका लागि हुँदै होइनन् । पहुँच र शक्ति हुनेहरूका लागि मात्र न्याय छ, हाम्रो देशमा ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले न्याय दिन नसकेपछि हामी सिंहदरबार हान्नियौं । आँखाभरि आँसु र गोडाभरि ठेला उठाउँदै चिसो सडकमा निकै दिन धर्ना दियौं । आमसमुदायले हाम्रो माग जायज हो भनिरहँदा पनि सरकारले हामीलाई शंका गरिरह्यो । हामीले गरेको यो कोसिस, हिम्मत र हाम्रो सपनालाई सरकारले विश्वास गरेन । अत्याचारीलाई साथ दिन ठूल्ठूला प्रहरी हाकिम र नेतालाई के बाध्यता पर्‍यो ? हाम्रो आशा अब निराशामा फेरिनु हुन्न । महिला हिंसाजस्तो मुद्दामा पनि जालझेल, भनसुन, चलखेल अब हुनु हुन्न । र, हाम्रो चाहना छ– न्यायको परिभाषा बदलिनुपर्छ । न्याय हाम्रा लागि पनि हुनुपर्छ । पीडक र पीडितबीच अब राजनीतिक शक्ति उभिनु हुन्न । यसो भए मात्रै न्यायको हाम्रो आशा निभ्दैन ।
प्रकाशित : पुस २४, २०७८ १०:४१
पनौतीको त्रिवेणीघाटमा माघको पहिलो प्रहरबाटै छिर्दै छ, मकर मेला । १२ वर्षे कुम्भपर्वको स्वागतमा हात फैलाएर तमतयार छ, पनौती सहर । भक्तजनले महिनादिनसम्म रोसी र पद्मावतीको संगममा आस्थाको डुबुल्की मार्दै गर्दा यो घाट स्वयं भने एकपटक फेरि आफ्नै इतिहासले नुहाउनेछ । त्यो इतिहासले त्रिवेणीको कथा मात्र भन्दैन, यसैले सिञ्चन गरी बसाएको पनौती सहर, संस्कृति अनि विकसित मानव–समाजको पनि सविस्तार बयान गर्छ ।
पुस २४, २०७८ दीपक सापकोटा
‘मकरमासमा त्रिवेणीमा दूध बग्छ !,’ ठिहिर्‍याउने माघमा अँगेनावरिपरि बसेका हामी भुरालाई हजुरआमा भन्नुहुन्थ्यो ।
प्रायः सपनामा म उत्तरप्रयाग र शचीतीर्थ पनि भनिने पनौतीको त्रिवेणीघाट पुगिरहेको हुन्थेँ । स्वप्नविचरणमा घाटको बगरमा दौडिरहेको हुन्थेँ । कहिले जलिरहेको चिताअघि टक्क उभिन्थेँ । अर्को क्षणमा देह भस्म भइसकेपछि पानी खन्याइएको भकारीबाट उड्ने बाफको अनौठो गन्ध सुँघिरहेको हुन्थें । कतिपटक म निशाचरझैं राति अबेरसम्म घाटको आसपास घुमिरहेको हुन्थेँ । मेरो आँखाअगाडि त्रिवेणीघाटमा पानीको सट्टा दूध बगिरहेको हुन्थ्यो । मलाई थाहा छ– सपनाको सन्देश हुन्छ, इतिहास हुँदैन ।
सन् २०२० । तस्बिर : प्रशान्त श्रेष्ठ
हजुरआमा भनिरहनुहुन्थ्यो, ‘माघ महिनाभर चल्ने मकर मेलामा त्रिवेणीघाटमा नुहायो भने सबै पाप नष्ट हुन्छन् ।’ विक्रमको २०५४ र २०६६ सालको मकर मेलामा पिताजीको पछि लागेर त्यहाँ पुगेको मैले पनि स्नान गरेको थिएँ । के म पापमुक्त भइसकेँ ?
हजुरआमासँग जिउँदै थिए जादूमय लोकका कथा, मिथक र किवंदन्ती– पुराना मान्छेबाट सुनेका वा गाउँघरमै बुनिएका । अनि अरूलाई (सायद नाति–नातिनालाई) सुनाउन जतनसाथ राख्नुभएको थियो कथाहरूको कुटुरो ! हजुरआमाले सुनाएका कथाको पछिपछि लागेर म निस्किएको छु मिथक र किंवदन्तीको यात्रामा !
धेरैपछि म उस्तै बाल्यभावमा यस घाटको एकछेउ उभिएको छु । कुनै बेला समयको लय व्यर्थ हुनेगर्छ । निकैबेरदेखि नदी बगिरहेको हेरिरहेछु ः बस् नदी त बगिरहेछ । सामुन्नेको कृष्ण मन्दिरका ‘देवता’ ले पनि नदी बगेको हेरिरहेका होलान् । जैविक आनन्द ओढेर मग्न रहनेहरुका लागि घाट र नदीको भाषा केही क्रूर जरुर हुन्छ, तर जीवनान्तर अस्तित्वको आराधना गर्नेका लागि त्यही वातावरणमा अनौठो मन्त्रमुग्धता हुन्छ । नदीको वेगमा प्रतिपल नयाँ कथाले जन्म लिन्छ । मस्तिष्कमा अभिलेख नभएका नयाँ ‘देवता’ ले पनि एकैछिनमै जन्म लिन्छन् ।
त्रिवेणी र पनौती सहरलाई जान्न शताब्दियौँ पुराना आख्यान र किंवदन्तीहरूमा प्रवेश गर्नुपर्छ । तिनमा इतिहास लुकेको छ र इतिहासलाई कब्जा गरिबस्ने राजाहरू यहाँ पनि छन् । तर, पनौतीमा राजाका मात्रै कथा छैनन्, प्रजाका परिश्रमका किस्साहरू पनि छन् । यहाँ आफ्ना तिलस्मी कथाहरू साधेर बसेका ‘देवता’ हरू पनि छन् । त्रिवेणीघाट जिन्दगी र मृत्युको एउटा साँघु हो, जसले अस्तित्व र अनस्तित्वको मैत्रीबाट बनेका रहस्यमय कथा–किंवदन्तीलाई आवागमन गराइरहन्छ ।
रोसी र पुण्यमाता नदीको यो जोड जीवन र मृत्युको संगम पनि हो । यी नदीको उद्गम पहाडबाट खसिरहेको कञ्चन झरना हो । निम्छरो घामको आड लागेर म हेरिरहेछु– पुण्यमाता मिसिएपछि झनै रौसिएको रोसी । रोसी त्रिवेणीघाटबाट थोरै पूर्व लागेर दक्षिणतिर सोझिएको छ । अलिकति पर पूर्वतिर पस्थली र खोपासीका फाँटहरूलाई काटेर यसले गहिरा खोँच बनाएको छ । खोँचमाथि परपरसम्म फैलिएको फाँटको डिलमा घामका पहेँला किरण नाचिरहेका छन् ।
काठमाडौंबाट ३२ किमि दक्षिणपूर्वको काभ्रे जिल्लामा पर्ने पनौती सहर र त्रिवेणीघाटबारे ‘नेपाल महात्म्य’ मा पनि लेखिएको छ । धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनौतीको संगमस्थल इन्द्रकी पत्नी शचीका नामबाट शचीतीर्थका रूपमा स्थापित छ । स्थानीय बासिन्दा यसै घाटलाई त्रिवेणीघाट वा त्रिवेणीधाम भन्छन् ।
त्रिवेणीघाट– सन् १९७६ । तस्बिर : जेरार्ड तोफाँ
‘वासिङ सिन्स : द मेकर मेला पिल्ग्रिमेज अफ पनौती, नेपाल’ शीर्षक लेखमा फ्रान्सेली मावनशास्त्री जेरार्ड तोफाँ लेख्छन्, ‘स्थानीय वंशावलीहरूमा यो क्षेत्र भारत, अलाहबादस्थित गंगा, यमुना र सरस्वती नदीको संगमस्थल प्रयाग क्षेत्रझैं पवित्र मानिन्छ । भारतमा प्रयागको जति महत्त्व छ, त्यति नै महत्त्व त्रिवेणीघाटको नेपाली समाजमा छ । नेपाल महात्म्यमा त्रिवेणीघाटलाई १६६ मुख्य तीर्थस्थलमध्ये एकका रूपमा वर्णन गरिएको छ ।’ घाटको ठीक सामुन्नेमा छ– कृष्ण मन्दिर । पारिपट्टि छ– ब्रह्मायणी मन्दिर । यो अद्भुत घाटको सेटिङ, डिजाइन र किंवदन्तीको प्लटले कुनै पनि मानिसलाई मन्त्रमुग्ध पार्न सक्छ ।
पनौतीको त्रिवेणी त्यस्ता घाटमध्ये एक हो, जसले आफ्नो मात्रै कथा सुनाउँदैन, आफूले सिञ्चन गरी बसाएको पनौती सहर, त्यसको इतिहास, संस्कृति, देवस्थल अनि त्यहाँ विकास भएको मानव–समाजबारे सविस्तर बयान गर्छ । यो घाट इतिहासको परिधिमा रहेर पनि समयातीत छ ।
मकरमासका बखत त्रिवेणीघाटको नदीमा पानीको सट्टा दूध बग्ने मिथक–कथा ! घाटमा नुहाएपछि पाप नष्ट हुने विश्वास ! एउटा बालकले झैँ म कहिलेकाहीँ सोच्छु– के कुनै सुदूर अतीतमा यहाँ दूध बग्थ्यो ? लेखक कृष्णप्रकाश श्रेष्ठले ‘स्थाननामकोश’ मा लेखेका छन्, ‘मकरमासमा यस त्रिवेणीमा दूध बग्छ भन्ने जनधारणा छ (पृष्ठ. २३३) ।’
हुन पनि मान्छेको सभ्यता विश्वास, अविश्वास र अन्धविश्वासको त्रिवेणी हो । त्रिवेणीघाट त्यसको प्रमाण हो । कसैको विश्वास, कसैको अविश्वास त कसैको अन्धविश्वास हुनु सभ्यताको निरन्तर सत्य हो । यही सत्यका कारण सभ्यता कहिल्यै समान प्रवाहमा छैन । सभ्यता निर्द्वन्द्व कहिल्यै हुन सक्दैन, त्यसका द्वन्द्वका रहस्यहरूलाई धर्मले मेटाइदिन्छ । त्यसपछि प्रश्नहरू निरञ्जन–निराकार बनेर विलय हुन्छन्, जसरी विश्वास, अविश्वास र अन्धविश्वास सबै बोकेर मानिसको लर्को त्यहाँ पुगेर विलय हुन्छ ।
त्रिवेणी अन्यत्र पनि छन् । तर, यहाँको त्रिवेणीमा एउटा खास रहस्य त यसको नाममै छ । त्रिवेणी भनिए पनि यहाँ दुईवटा नदीको मात्रै संगम देखिन्छ– रोसी (लीलावती) र पुण्यमाता (पद्मावती) । तर, स्थानीय बूढापाका र तान्त्रिकहरू विश्वासका साथ भन्छन्– यहाँ तीनवटा नदी बग्छन् । त्यसो हो भने तेस्रो नदी किन देखिँदैन ? ‘इन्द्रायणीको तपस्याबाट प्रसन्न भएकी पार्वती नदीका रूपमा बग्न थालेको हुनाले रुद्रवती भनिएको अनुश्रुति छ । रोसी र पद्मावतीको संगममा मिल्ने अर्को नदीलाई गुप्तवती पनि भनिन्छ (स्थाननामकोश) । र, मानिसहरू भन्छन्– रुद्रवती अर्थात् गुप्तवती गुप्त रूपमा बगिरहेकी छिन्, जुन सतहमा देखिन्नन् । ‘पनौतीका प्राचीन कथाहरू’ किताबका लेखक तुयुकाजी ताम्राकार भन्छन्, ‘गौतम ऋषिकी सुन्दरी पत्नी अहिल्याको रूपजालमा फसेर स्वर्गका राजा देवराज इन्द्रले हजार योनि हुनुपरेको र त्रिवेणीघाटमा स्नान गरेपछि उनी श्रापयोनिबाट मुक्त भएको कथा पनि यहीँ जोडिन्छ ।’
अनुसन्धाता भोगीराज चाम्लिङका अनुसार, रोसी खोलाले किराती र काठमाडौंलाई जोडेको छ । भन्छन्, ‘किराती भाषाहरूमा र पूर्वी नेपालमा किरातीहरूको थातथलोमा नदीलाई कुसी/कोसी भनिन्छ, जसरी काठमाडौंमा नदीलाई खुसी (जस्तै, सामाखुसी) भनिन्छ । त्यसैले रोसीको आदिम शब्द सम्भवतः रोकुसी वा रोखुसी हो ।’
त्रिवेणीघाटछेवैको पनौती बजारभित्रका पुराना पाटीमा बसेर बूढापाकाहरू कथा हाल्छन्– ‘जवानीमा पेट्रोम्याक्स बोकेर रोसी खोलामा माछा मार्न जाँदा एकै छिनमा निकै माछा जम्मा हुन्थे । अहिले रोसीखोलामा माछा नै हराइसके ।’ त्रिवेणीघाट क्षेत्रको रेखदेख गर्ने स्थानीय रविनभक्त कर्माचार्यलाई लाग्छ, त्रिवेणीघाटका नदीमा अहिले पानी निकै घटेको छ । उनलाई सम्झना छ, पहिले–पहिले रोसी र पद्मावती मिसिएपछिको नदीको भेल हिउँदमा पनि तर्न नसकिने हुन्थ्यो ।
पनौतीमा हालसम्म ढिकीको प्रयोग नगरिने कथामाथि डा. सुमनराज ताम्राकारले ‘पनौतीका चाडपर्वहरू र मकरमेला’ किताबमा स्थानीय अनुश्रुति टिपेका छन्, ‘पनौतीलाई वासुकि नागले संरक्षण र वेष्टित गरेका छन् । त्यसैले राजा आएर यहाँ बास बस्नु हुँदैन । नागलाई चोट लाग्छ भनेर ढिकी नकुट्ने प्रथा छ । एउटै ढुंगामाथि पनौती अडिएकाले पनि यहाँ ढिकी राख्नु हुन्न भनिन्छ ।’ नागराजाको शान्ति भंग नहोस् भनेर मानिसहरू अद्यापि ढिकी प्रयोग गर्दैनन् भनी ‘स्थाननामकोश’ मा लेखिएको छ । भनिन्छ, जसरी पनौतीमा ढिकीमा धान कुटिँदैन उसैगरी काठमाडौंमा गोरु नारेर हलो जोतिँदैन । कृषि जीवनमा आधारित नेपाली समाजमा किन हलो नजोतिएको ? किन ढिकीमा धान नकुटिएको ? रहस्यकै गर्भमा छ ।
त्यस वर्ष हिउँदको सुरुमै आरुबखडा फुल्न थालेको थियो । त्यही हिउँदको कुनै एक दिन, रूखबाट भुइँमा झरेका आरुबखडाको फूल अञ्जुलीभरि लिएर म त्रिवेणीघाटतिर गइरहेको थिएँ । घाटमाथिका डाँडा अरूबेला अद्भुत–मनोरम हुन्थे । त्यस दिन ती विरक्तलाग्दा थिए ।
घाट किनारका नाङ्गा–चिसा रूख भुइँतिर हेर्दै मौनी साधिरहेका थिए । सुस्ताउँदै माघको मधुरो घाम तापिरहेको, हजारौँ वर्ष बूढो बजार नजिकैका दक्षिण–पश्चिमपट्टिका पनौती–वनका डाँडा धुलाम्मे मन्डी ओढेर घाट कुरिरहेकी जीर्ण कायाकी वृद्धाजस्तै देखिन्थे । पनौती–वनलाई वन कार्यालयको कागजमा ‘थलपुवन’ लेखिएको छ । बूढाहरू यो वनको किंवदन्ती सुनाउँछन्, ‘विराट राजाको गाईगोठ भनिने थलपुवनका रूखहरू फेदमा घिउ हालेर हुर्काइएका छन्, त्यसैले यहाँका रूखका दाउरा काँचै पनि बल्छन् ।’
नदीको वहाब जाँगर हराएको बटुवाजस्तै थियो । खरानी पखालेपछि बाफ उडिरहेको चिताको भकारीनेर एउटा रूखको हाँगामा बसेको काग उच्चाटलाग्दो सुरमा एकोहोरो काँ–काँ गरिरहेको थियो । ब्रह्मनालमा एउटी मृत्युन्मुख (मुर्मूष) पाको उमेरकी महिलाका गोडा डुबाइएका थिए । त्यहाँ पुर्‍याइएको एक छिनपछि उनले आफ्ना गहिरा इनारझैं आँखा बिस्तारै चिम्लिइन् । चिसो पानीमा डुबाइएका उनका जोर खुट्टा तनक्क तन्किए । त्यति नै बेला उनको देहाशेष भयो अर्थात् देहबाट आत्मा उडेर गयो ।
अन्यत्रका घाटहरूभन्दा त्रिवेणीको ब्रह्मनाल फरक छ भन्छन्, पनौतीका प्रेमबहादुर प्रधान (७२) । उनका अनुसार, त्रिवेणीघाटको यो ९ हाते ढुंगा काशीबाट ल्याइएको हो । ‘ढुंगामा सुनको जलप लागेजस्तै पत्र–पत्र छन्, जसमा सुनका स–साना कण देखिन्छन् ध्यान दिएर हेर्दा । पनौतीका कोही पनि मानिस घरमा मर्दैनन्, अन्तिम बेला नाडी हेरेर अनिवार्य घाट लगिन्छ र ब्रह्मनालमा राखिन्छ’, प्रधान भन्छन्, ‘त्रिवेणीघाट पनौतीका बासिन्दाको मात्रै होइन । वरपरका ३० गाउँबाट दाहसंस्कारका लागि शव ल्याइन्छन् । तर, बाहिरका शव पनौती बजारभित्रबाट ल्याउन पाइँदैन, नमोबुद्धतिर जाने सडक वा रोसीपारिबाट मात्र ल्याइन्छ ।’ काशीदेखि पनौतीसम्म त्यति गह्रुंगो ढुंगा बोकेर ल्याउने सम्भावना उति देखिँदैन । सायद यो रोचक किंवदन्ती हो ।
‘देह–विलय’ माथि इतिहासविद् योगेश राज लेख्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले रक्तसञ्चार रोकिन्छ । श्वास–प्रश्वास प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । त्यसपछि मुटुले धुकधुक गर्न छोड्छ । अंग–प्रत्यंगमा रक्त–सञ्चार नभएपछि तथा बाह्य–तत्त्वलाई भित्र र भित्री मैलालाई बाहिर लान नसकेपछि जीवन शतत हुन सक्दैन । त्यतिबेला शरीरको सबैभन्दा कमजोर स्थानदेखि जीवनी–शक्ति हराउन थाल्छ । सबैतिरबाट तेज गुँडुल्किएर बसेको अहंकारमा अस्ताउँछ । जीउ चिसिन थाल्छ (सन्ध्या–संरचना– हिन्दुनेवारहरूको मृत्युचेतना, पृष्ठ.९५) ।’ किताबमा वर्णन गरिएको यस्तो मृत्यु प्रक्रिया मैले त्यस चिसो दिन त्रिवेणीघाटमा देखेको थिएँ, ब्रह्मनालमा जीवन बिसाइरहेकी एक वृद्धाको शरीरमा ।
जसरी मेरो अञ्जुलीको आरुबखडाको फूल एक छिनअघि रूखबाट भुइँमा झरेथ्यो, उसैगरी देहबाट ती वृद्धाको श्वास बाहिर निस्केर विशाल शून्यमा विलीन भएको थियो । मेरो अञ्जुलीबाट आरुबखडाको फूल पनि उसै गरी भुइँमा झरेको थियो, जसरी अघि रूखबाट झरेथ्यो ।
जान्नेहरू भन्छन्– मसानघाट नै यस्तो एउटा ठाउँ हो, जहाँ बलिरहेको चिताअघि मानिसहरू जीवन र मृत्युसँग जोडिएको शाश्वत सत्यसँग साक्षात्कार गर्छन् वा त्यसको महिमा–बोध गर्छन् । यसो पनि भन्छन्– यस दुनियाँमा भएका सबै वस्तु रंगहीन हुन्छन् । पानी, हावा, अन्तरिक्ष र पूरै जगत् रंगहीन छ । मचाहिँ ‘जीवन र मृत्युको महिमा–बोध’ गरिने घाटलाई खरानी रंगको देख्छु । चितामा डढेका लासबाट खरानी रंगको धूवाँका घना गुच्छा आकाशतिर बढ्छन् । खरानी अर्थात् हलुका सिलेटी, मृत्युको रंग हो, मसानघाटको रंग हो । हावाको पातलो झोक्काले पनि उडाउँछ चिता पखालेपछिको बाँकी खरानी । झरी परेको रात, बिहान र साँझ भेलले पखालेको खरानी नदीसम्म बगेर धमिलो पानीमा मिसिन्छ । मलाई चिता सबै अवस्थामा एउटै रंगको लाग्छ । यो रंग झरी परेपछि भने केही चहकिलो देखिन्छ । हावाको वेगमा अलि धमिलो । रातको नीरवतालाई चोइट्याउने सिरेटो, चट्याङको प्रकाशमय रात वा कुहिरिलो बिहान ! घाट श्वेत–श्याम रंग मिसिएर बनेको गाढा सन्ध्या रंगको देखिन्छ । अतः घाटको रंग अनौठो हुन्छ, खरानीको जस्तो या त मट्मैलो, ध्वाँसे ।
घाट कहिले बरफभन्दा चिसो हुन्छ, जस्तो– म पुगेको माघको त्यस दिन थियो ।
घाट कहिले औधी रापिलो हुन्छ, जस्तो माघको ठन्डीमा भर्खरै ब्रह्मनालमा देह बिसाएकी वृद्ध महिलालाई जलाएपछि हुन्छ ।
तर, हमेसा घाट देखिन्छ, शोकग्रस्त ।
घाट सदियौँदेखि मौन छ, आफ्नो छेवैबाट बगिरहेको नदीका छालहरूलाई हेर्दै बसिरहेको । अर्को किनारमा उभिइरहेको ब्रह्मायणी मन्दिर पनि घाटजस्तै छ चुपचाप ।
म पनौतीको यही त्रिवेणीघाट, ब्रह्मायणी मन्दिरवरपर हलुका कदमले डुलिरहन्छु ।
वर्षात्मा कस्तो हुन्छ त्रिवेणीघाट ? पनौती प्रवेशपछि सम्झनाको झटारो हान्दै पुराना स्मृतिले लखेटिरहन्छन् मलाई । बेस्कन उर्लेको थियो रोसी ! २८ वर्षअघि उत्कट वर्षाका बेला बनेपा जान आमाको पछिपछि कुशादेवीबाट पनौती आएको सम्झन्छु– त्यो मानौं ‘आरीघोप्टे’ झरी परिरहेको झमक्क हुनै लागेको साँझ थियो– घार्घार, झार्झार्, दर्दर, सिरसिर...! पिठ्युँमा निदाइरहेको भाइ बोकेर च्यारच्यार आवाज आउने सेतो प्लास्टिक शिरमा ओढेर हिँडिरहेकी आमा र बहिनीका कलिला हात समाएर आमाकै पछिपछि हिँडिरहेको म ! मानौं, मेरो दिमागमा पानीफोटो बनेर थपक्कै बसेको छ त्यो बर्खे साँझ ।
पनौतीमा उत्खनन गरिएको प्राचीन लायकुअघिको ढुंगा छापेको गल्लीमा टेकेका दिनहरूको स्मृति पनि छन् मसँग (इतिहासकार ज्ञानकाजी मानन्धरको किताब ‘बनेपा सातगाउँ’ मा लायकुलाई यसरी अर्थ्याइएको छ– लायकु भनेको राजकुल हो । लायकु शब्द मल्लशासनको मध्यकालदेखि चल्दै आएको पाइन्छ) ।
कुशादेवीको एक सज्जनको घरको बुइँगलमा मकैका खोस्टाको डंगुरभित्र पुरिएको जीर्ण अवस्थामा फेला परेको थियो, भूपी शेरचनको किताब ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ । पाइन्टको पछिल्लो खल्तीमा गोलो आकारमा खुम्च्याएर राखिएको त्यस किताब घाम लागेको एक दिन त्रिवेणीघाटमा बसेर खोलेको थिएँ । नवयौवनाको बयान गर्ने ‘शुभ्र शान्त र स्निग्ध शिखा मैनबत्तीको’ यसरी मैले घाटमा बसेर पहिलोपटक पढेको थिएँ । भूपीसँग मेरो पहिलो परिचय यही घाटमा भएको थियो ।
म कुनै जोगी वा निशाचरझैं रात–साँझ बारम्बार पुगिरहेको हुन्थे– त्रिवेणीघाट, यहाँका नसा छाम्न ।
मकरमासमा धुनी जगाएर रातैभर जाग्राम बस्ने निशाचरहरू पनि महिनैभर त्रिवेणीघाटमै भेटिन्छन् । साताअघिको यो चिसो पुसमा म फेरि बाल्यकालको स्मृतितिर पस्दै त्रिवेणीघाट र पनौतीका पुराना गल्लीतिर डुलिहिँडे । २८ वर्षअघि पहिलो पाइला टेकेको लायकु दरबारको ठ्याक्कै अघि अहिले खुलेको छ– क्याफे लाम्पाटी । प्राचीन बजारको ढुंगा छापेको पुरानो गल्लीमा खुलेका छन्– अन्य ‘लिकर सप’ ।
भूपीको कविता पढेका ती दिनमा घाटकिनारको पाटीमा एउटा पुरानो किसिमको बिग्रेको घडी झुन्डिएको हुन्थ्यो । त्यसले पनि समय त दिइरहन्थ्यो– थाहा छैन, त्यो घडीले दिने समय गलत थियो वा सही ! अहिले भित्तामा त्यो घडी थिएन । गर्जिरहेको बाघको अनुहार खोपिएका ढुंगाबाट तिरतिराउने सदियौं पुराना थुप्रै ढुंगेधारा अहिले पनि छन् यहाँ । तर, ती धाराबाट विरलै पानी आउँछन् । पाटीमा भजन चलिरहेकै छ । र, अहिले पाटीमा एक जोगी बस्छन्, २४ घण्टै धुनी जगाइरहेका । उनी रातैभर घाटवरिपरि डुली हिँड्छन् मकरमासका नयाँ निशाचरजस्तै । पुराना एल्बम पल्टाउँदा देखिन्छन्– २० वर्ष पुराना तस्बिर, जसले पनौतीको पुरानो कथा भनिरहेको छ । पुराना मानिस छन् तस्बिरमा, सायद कत्तिको यस सहरमा अब कुनै चिनो बाँकी छैन । त्रिवेणीघाट पनि कैद छ तस्बिरमा– फ्रोजन भएको छ त्यो !
पनौती बजार हुँदै त्रिवेणी घाटसम्म पुग्ने बाटोवरपरका चोक–डबली, ढुंगेधारा, पाटीपौवाले मुक उद्घोष गरिरहेका छन्– पनौती शताब्दिऔँ पुरानो बस्ती हो । घाटका भर्‍याङ, वरपर उभिएका पाटी र तिनका भित्तामा कुँदिएका अनेक देवताका अनेक मुद्राका अनेक कला सबैमा एकतमासको प्राचीन ध्वनि अनुगुञ्जित छ । एकछिन प्रवेश गरौं पनौतीको इतिहासमा ।
महाभारत पर्वत शृंखलाको उत्तरी काखको यस नगरलाई विभिन्न कालमा विभिन्न नामले पुकारियो– ‘पूर्णमती’, ‘अश्मपुर’, ‘पूर्णवती’, ‘पुण्यवती’, ‘पानवती’, ‘पाञ्चाल’, ‘पाञ्चाल देश’, पुण्यावतीपुरी’, ‘पलाँती’, ‘पनाती’,‘पनौती ग्राम’, ‘पनौती’ ।
केही किंवदन्ती भन्छन्– राजकुमार महासत्त्वको पाञ्चाल देश नै पुण्यवती हो र यसैको अपभ्रंश भएर पनौती नाम रहेको हो । महासत्त्वले आफ्नो शरीरको रगत–मासु खुवाएर एउटी भोकी बघिनी र उसको डमरुको प्राणरक्षा गरेको आख्यान बौद्ध–साहित्यमा प्रचलित छ । पनौतीबाट ५ किलोमिटरजति सीधा पूर्वमा पर्ने नमोबुद्धको स्तूप महासत्त्वकै अस्तुमाथि उभिएको भनिन्छ ।
‘पनौतीको अगलबगलका बनेपा र खोपासी अहिलेभन्दा १४ सय वर्षअघि नै विकसित अवस्थामा आइसकेका थिए भन्ने लिच्छविकालका अभिलेखबाट बुझिन्छ’, इतिहासकार महेशराज पन्त भन्छन्, ‘पनौती त्यसै कालखण्डमा विकसित भइसकेको थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पौने ६ सय वर्षअघिदेखि हामी पनौतीको उल्लेख तात्कालिक अभिलेखहरूमा भएको पाउँछौं ।’
राजा अंशुवर्मा प्रशासनलाई केन्द्रमुखी मात्रै बनाउन चाहँदैनथे । त्यसैले काठमाडौंबाहिरको खोपासी प्रदेशका जनतालाई सानातिना मुद्दा–मामिलाको छिनोफानो गराउनुपर्दा राजकुलको द्वारसम्म धाउनु नपरोस् भनी केही अधिकार स्थानीय अगुवालाई नै दिएको राजाज्ञा जारी गरेका थिए उनले । खोपासीमा भेटिएको अभिलेखबाट यही कुरा प्रस्ट हुन्छ (धनवज्र बज्राचार्य, लिच्छविकालका अभिलेख, पृष्ठ. २७४) ।
‘स्थाननामकोश’ अनुसार, राजा आनन्ददेवले बनेपाबाट ६ किलोमिटरजति दक्षिण–पूर्वतिर पुण्यवती र रोशमतीको मध्यभागमा कलिगत संवत् ४१९७ (विसं ११५३) मा आसपासका गाउँहरू मिलाएर सात सय घरधुरीको बस्ती बसाएका थिए । (आनन्ददेवको शासनकाल विसं १२०३–१२२४ मानिन्छ । त्यसैले उनले विसं ११५३ मा सात सय घरधुरीको बस्ती बसाए भन्ने मिति इतिहासको तथ्यसँग बाझ्छ ।)
ज्ञानकाजी मानन्धरले पनौतीको निर्माण आनन्ददेवले गरेको लेखेका छन्, ‘चार दिशामा चार दिक्पालहरू अनि अष्टमातृकाले परिवेष्टित, कलिगत संवत् ४१९७ मा राजा आनन्ददेवबाट निर्मित यो सहर अति पवित्रस्थल हो । काभ्रेमा अहिले पनि बृहत्तर पनौती क्षेत्रलाई ‘सात सय पनौती’ भन्ने चलन छ । किनभने राजा आनन्ददेवले त्यतिबेला सात सय घरको पनौती सहर निर्माण गरेका थिए ।’ (बनेपा सातगाउँ, पृष्ठ. ९०) ।’
सूर्यप्रसाद लाकोजू भने ज्ञानकाजीभन्दा भिन्न मत राख्छन् । आनन्ददेवले ती सात गाउँको निर्माण होइन, एकीकरण मात्र गरेको उनको विचार छ । ‘पनौतीको स्थापना आनन्द मल्लले गरेको भनिए पनि त्यसभन्दा धेरैअघि नै नगर–बस्तीको रूपमा पनौतीको विकास भइसकेको थाहा हुन्छ (पनौती, पृष्ठ. ६८) ।’
‘प्राचीन नेपाल’ किताबमा साफल्य अमात्यले पनि आनन्ददेव (मल्ल) को कथनलाई सत्य मान्न गाह्रो मानेका छन् । ‘पनौती आसपासका गाउँहरू– खोपासी, बनेपा आदिमा लिच्छविकालीन शिलालेखहरू प्राप्त भएबाट यो प्रमाणित भइसकेको छ कि ती गाउँहरू लिच्छविकालदेखि नै बसोबास तथा गुलजार थिए (पृष्ठ. १०९) ।’
इतिहासकार केदारनाथ प्रधानले चाहिँ पनौती प्रागैतिहासिक कालदेखि मानव सभ्यताको थलो रहेको जनाएका छन् । उनका अनुसार, आनन्ददेवको समयमा पनौतीको स्थापना भएको कथन मान्न कठिन छ । ‘किनभने पनौती वरिपरि– खोपासी, बनेपा, नाला, साँगामा लिच्छविकालीन अभिलेख पाइएका छन् । तेह्रौं शताब्दीदेखि नेपालको इतिहासमा देखिएका ‘भ्वन्तश्री’ (बनेपाली) राजवंशको बोलवाला भएको चौधौं शताब्दीताका बनेपा–इलाकाको सामन्त–शासक रामवर्द्धन परिवारको मूलघर पनौती थियो भन्ने दाबी गरिएको छ (बनेपाको ऐतिहासिक रूपरेखा, पृष्ठ. ३) ।’ प्रधानले पनौती, खोपासी र नजिकैको बल्थलीमा करिब ७ हजार वर्षअघिका ढुंगाका कोदालो, बन्चरो र हँसियाजस्ता हतियार भेटिएको लेखेका छन् ।
२०७७ भदौमा पनौतीमा एक प्राचीन मूर्ति भेटियो । पुरात्तत्वविद्हरूका अनुसार, त्यो मूर्ति कम्तीमा २२०० वर्ष पुरानो हो । ‘ठेट प्रमाण नभए पनि उक्त मूर्ति महिलाको आकृतिजस्तै देखिन्छ । बिहारस्थित पटना संग्रहालयको एक मूर्तिसँग त्यो मूर्ति धेरै समान रहेकाले यसलाई पहिलो शताब्दीतिरको आकलन गरिएको हो । पनौती निकै प्राचीन बस्ती हो भन्ने कुरा यहाँ भेटिएको मूर्तिले बताउँछ,’ सुमनराज ताम्राकार भन्छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ, पनौती कम्तीमा पनि २ हजार वर्ष पुरानो सहर हो ।
केदारनाथ प्रधानले मल्लकालको पनौतीको इतिहासलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । लेख्छन्, ‘भक्तपुरका युवराज भूपतीन्द्र मल्ल सानै छँदा कान्छी आमा र दरबारको भाजुकस मिलेर हत्याको षड्यन्त्र रची उपत्यकाबाहिर लगी मार्नू भनी हत्यारालाई खटाए । तर, उनीहरूले मारेनन्, पनौती नजिकैको कुशादेवीको जंगलमा छोडेर फर्किए । दाउरा खोज्न गएका मानिसले बालकको उद्धार गरे र पनौतीका राजप्रतिनिधि सरदारलाई जिम्मा लगाए । सरदारले बालकको पहिचान गरे र पनौतीको गद्दी उनैलाई सुम्पिए । भूपतीन्द्रले पछि भक्तपुरमा आक्रमण गरे र गद्दी हात पारे । भूपतीन्द्रले नै ब्रह्मायणीको मन्दिर स्थापना गरे । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका जित्नुअघि विसं १८२२ तिर पनौती गोरखाको हात परेको थियो, तर सो भेगका तामाङहरूको समर्थन जित्न नसकेको पृथ्वीनारायणको पत्रले भन्छ (पनौतीको ब्रह्मायणी जात्रा, पृष्ठ. ६) ।’
महेशराज पन्तको लेखमा भने पृथ्वीनारायण शाहले पनौती विजय गरेको मिति फरक छ । उनी लेख्छन्, ‘झन्डै ५०० वर्षअगाडि मल्लहरूको राज्य पनि टुक्रियो र यहाँ बनेपा, काठमाडौं, भक्तपुर र पाटन यी ४ राज्य खडा भए । बनेपामा स्वतन्त्र राज्य खडा भएपछि बनेपासँगै रहेको पनौती पनि बनेपाली राज्यको अंग बन्न पुग्यो । तर, बनेपाली राजवंश छिट्टै निःसन्तान भएकाले बनेपा राज्यसँगैको गोतिया राज्य भक्तपुरमा मिल्न गयो र पनौती पनि भक्तपुरकै अंग भई विसं १८२० सम्म रह्यो । विसं १८२० कात्तिक ११ गते पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले पनौती विजय गरेपछि पनौती नेपाल राज्यको विशाल अंग हुन पुगेको थियो । (जनैपूर्णिमादेखि रानीपोखरीसम्म, पृष्ठ. ३५) ।’
इतिहासविद्हरूको विश्वास छ– पनौतीको प्राचीन थलो पनौतीभन्दा पश्चिमको जेना वा जेलाँदे भन्ने ठाउँमा थियो । केदारनाथ प्रधानले लेखेका छन्– ‘मल्लकालको पूर्वार्द्धको अन्त्यतिर जेलाँदेमा उडुस, उपियाँहरूले सार्‍है दुःख दिएका कारण त्यहाँका सबै बासिन्दाहरू पुरानो थलो छोडी हालको थलोमा बसाइँ सरे । जेलाँदेको त्यस प्राचीन थलोमा अझै मूर्ति तथा मुद्राहरू पाइन्छन् ।’
मल्लकालको पनौतीबारे ज्ञानकाजी मानन्धर भन्छन्, ‘मल्लकालका लागि पनौती क्वाठ (सिपाही राख्ने ठाउँ) थियो । उत्खननमा यहाँ चारैतर्फ चारवटा इनार फेला परेका थिए ।’
इतिहासविद्हरूले लिच्छविकालका अंशुवर्माको जन्म पनौती क्षेत्रस्थित खोपासीमा भएको अनुमान गरेका छन् । बनेपा सातगाउँ (बनेपा, पनौती, धुलिखेल, नाला, साँगा, श्रीखण्डपुर र चौकोट) मा बसी भोटान्त प्रदेशमा नीलिम वर्मादेखि वसन्त वर्मासम्म जम्मा ४८ जनाले शासन गरेका थिए । पछि विसं ६५० तिर यस भेगका प्रशासक महासामन्त अंशुवर्माले ‘महाराजधिराज’ (बनेपा दक्षुटोलको गोरखनाथ मन्दिरनेरको अभिलेखअनुसार) उपाधि लिएका थिए (श्यामसुन्दर राजवंशी, भोँतः देशका सात गाउँ र त्यहाँका अभिलेखहरू, बनेपा सातगाउँ– स्मारिका) ।’
साफल्य अमात्यले लेखेअनुसार, पनौतीका रामवर्द्धन परिवार सामन्तमध्ये एक थिए । र, पन्ध्रौं शताब्दीमा रामवर्द्धन परिवारले पनौतीवरपर मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाल उपत्यकाको शासन व्यवस्थामा ठूलो भूमिका खेलेको थियो । ‘करिब ६०–६५ वर्षजति नेपाल उपत्यकाको राजनीतिमा पनौतीका रामवर्द्धन परिवारका सामन्तको बोलवाला चल्यो । जयज्योति मल्लका छोरा यक्ष मल्लको उदय (विसं १५१०) सँगै रामवर्द्धन परिवारको इतिहास पनि टुंगिएको छ । यक्षका अगाडि सामन्य रामवर्द्धन परिवारका सदस्यहरू टिक्न सकेनन् र तिनीहरूको दबदबा त्यहीँ बिलाएर गयो ।’ (‘प्राचीन नेपाल’ पृष्ठ. ११०) ।
यो सांस्कृतिक सहरमा जसरी जीवनका धेरै विविधता भेटिन्छन्, उसैगरी यहाँबारे कतै अभिलेख नभएका अनेकौँ किंवदन्ती र किस्साकहानी यस भेगका बूढापाकाहरूको स्मृतिमा संगृहीत छन् । किंवदन्तीहरूमा विश्वास गर्नुपर्छ भनेर होइन, तर तिनलाई सांस्कृतिक सम्पदा ठानेर जगेर्ना गर्ने हेतुले त्यस्ता केही जनश्रुतिलाई अभिलेखमा राख्न लिपिबद्ध गरिँदै छ ।
त्रिवेणीघाटनजिकै घर भएका प्रेमबहादुर प्रधानको मस्तिष्कमा यस तीर्थबारे अनेक किंवदन्ती–किस्साहरू खाँदाखाँद छन् । जान्ने भएदेखि हरेक बिहान त्रिवेणीघाट पुगेर नुहाए, ०४१ सालसम्म । त्यसपछि त्यो रुटिनमा ब्रेक लाग्यो । भन्छन्, ‘त्रिवेणीघाट त ऋषिमुनिहरू नुहाउने ठाउँ हो ।’
मैले हजुरआमाबाट सुनेको जनश्रुति उनले पनि सुनाए, ‘मकरमासमा त्रिवेणीमा दूध बगेको कुरा मैले सानो छँदा सुनेको थिएँ, बुबाबाट । मैले देख्न पाइनँ । त्रिवेणीमा दूध बगे देशमै सहकाल आउँछ भन्नुहुन्थ्यो बुबा, अनि रगत बगे देशमै अनिष्ट हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो ।’ प्रधान सुनाउँछन्, ‘पद्मावती रातो भएर बगेको मैले आफ्नै जीवनकालमा देखेँ, २०२८ सालमा । सबैले राजा मरे भने । हामी सबैले अचम्म मानेर हेरिरह्यौं । माथिबाट बगेको रातो नदी नागदह पुगेपछि सङ्लो भयो ।’ उनले बुबाले सुनाएकै अनुश्रुति दोहोर्‍याए, ‘नागदहमा बसेका नागले रगत सोस्छन् ।’
‘त्रिवेणीघाटको कृष्ण मन्दिरसँगै संकष्टनारायण देवताको मूर्ति छ’, प्रेमबहादुर जनश्रुति सुनाउँछन्, ‘उहिले ती देवतालाई सुत्केरी हुन लागेकी महिलाका आफन्तजनले तोरीको तेल चढाउँथे । चढाइएको तेल दाहिनेतिर बगे छोरा हुने विश्वास गरिन्थ्यो, देब्रेतिर बगे छोरी । बीचबाट तेलको धारा बग्यो भने गर्भमा संकट आउँछ भनिथ्यो र यथार्थमा हुन्थ्यो पनि त्यस्तै । अब त्यो चलन हराइसक्यो ।’
आस्थाको पछाडि लागेर मानिसहरू मकरस्नान गर्न यो घाटसम्म आइपुग्छन् । पछिल्लोपटक २०६६ मा धुमधामसँग यहाँ मकर मेला लागेको थियो । अरू बेला प्रायः शान्त हुने सहरमा यस वर्षको (माघ–१) को मेलापछि भीडभाड र कोलाहल निकै बढ्नेछ । तर, महामारीको मौसममा कुम्भमेला उस्तै भव्य होला ?
त्रिवेणीघाटनेरैको इन्द्रेश्वर मन्दिरको हाताभित्र दक्षिणपट्टि उन्मत्त भैरवको मन्दिर छ । मन्दिरको टुँडालको कलाकारिता पनि शानदार छ । यहाँ युगलमूर्ति प्रशस्तै छन् । तर, ती कुनैमा कामकला खोपिएको छैन । प्यागोडा शैलीमा बनेको तीनतले इन्द्रेश्वर मन्दिरको स्थापना कहिले भयो भन्नेमा पन्तको खोजबिन छ– कम से कम साढे ६ सय वर्षअगाडि । उनी भन्छन्, ‘जयसिंहरामको पालाको एउटा शिलालेख पढ्दा उनले इन्द्रेश्वरको मन्दिरमा सुनको गजुर र ध्वजा चढाएका थिए भन्ने थाहा हुन्छ । जयसिंहरामको सम्झनामा राखिएको पनौतीको ताम्रपत्रमा विसं.१४५७ मा जयसिंहरामको मृत्यु भएपछि इन्द्रेश्वर महादेवलाई चतुर्मुख सुवर्णकोष चढाइयो भनिएको छ ।’
त्रिवेणीघाटको पाटीमा चारैतिर भव्य चित्र कोरिएका छन्– मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, पर्शुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि अर्थात् विष्णुका दस अवतार । चित्रहरूका रंग खुइलिएका छन् र ती उप्किने तरखरमा छन् । रविनभक्त कर्माचार्य पाकाबाट सुनेका कथा सुनाउँछन्, ‘यी चित्र डेढ सय वर्षअघि भक्तपुरका एक कलाकारले बनाएको इतिहास पाइन्छ । सुनेअनुसार ती कलाकारका आँखा थिएनन् ।’ केदारनाथ, मुक्तेश्वर, संकष्टनारायण, चार नारायण, कृष्ण, सूर्यनारायण, तुलानारायण, अहल्या शिला, शिवलिंग र ढुंगामा कुँदिएका अन्य कलात्मक मूर्तिले त्रिवेणीघाट एक खुला संग्रहालयजस्तो लाग्छ ।
पनौतीको इतिहास, मिथक र आख्यानको केन्द्रबिन्दुमा त्रिवेणीघाट नै आउँछ । ज्ञानकाजी भन्छन्, ‘यो घाटले किंवदन्तीमा कति महत्त्व राख्छ भने पशुपतिका विरूपाक्षलाई पापमोचनका लागि नेमुनिले त्रिवेणी गई स्नान गर्न सुझाएका थिए भनी संस्कृतमा लिखित ठ्यासफूमा उल्लेख छ ।’
महेशराज भन्छन्, ‘यी सबै कथा केवल पुराण हुन्, इतिहास होइनन् ।’
त्रिवेणीमा दूध बग्ने कथा केवल किंवदन्ती हो, इतिहास होइन । यस्ता मिथक–कथाहरू हजुरआमाहरूसँगै बाँच्छन्, उनीहरूले अर्को पुस्तालाई सुनाउँछन्, जसरी नदीमा दूध बग्ने कथा मेरी हजुरआमासँगै बाँच्यो र त्यो अहिले मसँग पनि अलिअलि बाँचिरहेको छ ।